Dhegeyso: Madaxweyne Xasan Culusoow oo Jubbooyinka iyo Gedo usharciyeeyey inay leeyihiin Digil iyo Mirifle kuna taageeray inay Maamul usamaystaan. | waamonews	Home
Tuesday, March 19th, 2013 | Posted by editor Dhegeyso: Madaxweyne Xasan Culusoow oo Jubbooyinka iyo Gedo usharciyeeyey inay leeyihiin Digil iyo Mirifle kuna taageeray inay Maamul usamaystaan.
Halkan ka dhageyso Fadeexada Madaxweynaha Somaliya ma Maamul gobaleedkuu ka soo horjeedaa mise qabiil gooni ah. Halkan ka dhageyso Digil iyo Mirif oo fashiliyay qorshaha Madaxweynaha Somaliya.
3 Responses for “Dhegeyso: Madaxweyne Xasan Culusoow oo Jubbooyinka iyo Gedo usharciyeeyey inay leeyihiin Digil iyo Mirifle kuna taageeray inay Maamul usamaystaan.”
Ali Zubeer says:	20/03/2013 at 5:49 am	Iska hadlow ina Igarre,
La yaabi maayo nacastan eelay ee dal ayan lahayn u qanqal taaqaya.
Labadaraadle la yaabi maayo xasan culusow oo ah mortal enemy of Absame iyo adeeriisa
inuu taageero beentan iyo riwaayadan si loo xagal daaciyo shirkii dhiciska ahaa ee Jubbaland.
Waxaan la yaabanahay nacasta Absame iyo adeerkiisa ee Jooga Muqdisho sida ay juuqdii u gabeen.
Cilmooge iyo xubnaha aan na matalin ee jooga muqdisho waxay maalin walba geliyaan khiyaano qaran oo aan ka yarayn tan uu galo xasan Dhuxulow.
Waar dadku damiir xumaa oo dadnimo yaraa.
Dhallinta iyo dadka Absame ha ogaadeen in mooryaanta Absame ee Xamar joogtay xitaa u jawaabi la’ ; ilka yar, Xasan dhuxulow iyo mooryaanta Hawiye inay yihiin mooryaan kale oo fulaya ah oo weliba afka lagaga xaaro.
Add your list of mortals nacastan MP yada sheeganaya oo sidii Qabriga u aamusan.
Eelay inay sidaa u hadasho waxaa keenay siyaasiyiinta Absame waaba haddii ay jiraane.
Gaar ahaan Beesha Cawlahan oo samayn weysay maamul goboleedka Bakool State of Somalia.
Bakool waxaa uu Ogadeen ka deggan yahay:
Qurac Joome Halka Hadamo ka deggan yahay qudha Magaalada Xuddur oo ah daabiyad aad u yar.
Dhikca kale waxay Bakool Saaran tahay gobolka Afdheer oo wada Ogadeen Cawlahan ah.
Waar dadku damiinsanaa oo dadnimo xumaa.
Waar ninka eelay sida uu u hadlay iyo dhiifoonaanta ka muuqata ila eega.
Bal garab dhiga marka siyaasiyiin ku sheegga Absame mediyaha la hadlayaan.
Waa ummad gabayda Absame laakiin aanan hadal siyaasadeed tuuran karin.
Waa kacaamiin wakhti beeshooda la jarrimanayo.
Absame iyo adeerkiisa with all its entities ie Civil society, political forums, organizations, intelectual groups, media houses iwm waa inay condemnation after condemnation soo saaraan oo ay ku fadeexaynaaan moorayaan Xasan Dhuxulow indhahana kaga candhuufayaan eelay.
Waa inay official oppology ka codsadaan Xasan Culusow oo gogol u dhigtaan beeshiisa Abgaal iyo guud ahaan Hawiye si looga xayuubiyo haybadda Madaxwaynnimo.
Moreover waa in la yidhaahdaa si public ah beesha Absame iyo addeerkeed ee iska leh Jubbaland waxay aqoonsigii kala noqotay Xasan Dhuxulow.
Waa in lagu dhawaaqaa Jubbaland Republic oo madax bannaan.
For Axmad Madoobe instead of dinning with fake actors in Nairobi he should lick his political disaster wounds and inuu iska dhigo nin rag ah oo mowqifkaasi caddaysto. Waa wakhtigii runta la isu sheegi jiray.
taagsade says:	20/03/2013 at 7:16 am	walaal iyadoon la helin TV absame leeyahay wax war lagaama qaadayo oo idaacadaha iyo TVyada iyagaa leh horta calaa aqal bal hal TV sameeya
Liboi-somali says:	21/03/2013 at 3:01 pm	Xasan calasow waa in loo dabagalaa laguna dacweyaa hubki uu ka saarey madaxtooyada kana iibsaday shabaab beesha caalamka ayaa fiiro gaar ah ku haysa dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed iyo xiriirka uu la leeyahay argagixisada iyo weliba naceyb weyn uu u hayo beel gaar ah, sheekada ah “lix gobol” waa tii keeni lahayd inuu ” qar dumo qayaamana dhaco qoysna harin”
balqis boosaaso: @badade 2 waa runtaa thanks aloooooooooot walalkiisa qaali meeshaan waxaa ka socda dabaal deg kuwa...
somaaali: Ganiiftaan xumoo afka urayo leh o mako iskuyereyso. Darbi jiif nimo ayaa kasoo hartay ardadkaan waa free...
somaaali: Kkkkkk waryaa ila qosla oislam ah gorma ayaad wax ahaan jirtay owax gumaysan jirtay waligaba saan ayuu...
Ogaade: Guul baan leenahay kuwaara dhamaanteen-
Badade 2: Balqis bosaso iyo mako walalayal dadkan hala caytamina waa dad dulaysan waayo qofku wuxu dareemi kara hooyo...